ကင်ပွန်းချဉ်ရဲ့ အံ့မခမ်းအစွမ်း… ဒီလောက်စွမ်းမှန်း ခုသိရပြီဗျာ – ရှအေလငျး
ပူပြင်း ခြောက်သွေ့သော နွေကာလနှင့် လိုက်ဖက်သော အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်း အစာ တစ်မျိုးမှာ ကင်ပွန်းချဉ် ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာသူ အတွက် အာဟာရဖြစ်ပြီး မကျန်းမာသူ အတွက် ဆေးဝါးဓာတ်စာ ဖြစ်သည့် ကင်ပွန်းချဉ်ကို အဖိုးနည်းဝန်ပါ သူသူငါငါ လွယ်ကူစွာ စားသုံး နိုင်သည်။
ကင်ပွန်းချဉ်ပင်သည် နွယ်ယောင်ပင်ယောင်ချုံပင်မျိုးဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသော ပင်စည်နှင့် အရွက်တံတို့တွင် ဆူးရှိသည်။
အခက်စိမ်းများ၌ နီမှိုင်းမှိုင်း အရောင်အဆင်း ရှိသည်။ အရွက် သေး ငယ်ပြီး ရွက်ထိပ် ဝိုင်းသည်။
အသီးမှာ သီးတောင့်ရှည် မျိုးပြား၍ ဖြောင့်သည်။ အစေ့များ ကြားတွင် အဆစ်များ ဖြစ်ကာ ချိုင့်ဝင်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား သဘာဝ အလျောက် အလေ့ကျ ပေါက်သော စားသုံးပင် ဖြစ်သည်။
ကင်ပွန်းချဉ်ကို ဟင်းချို ချက်သောက်ခြင်း၊ အချဉ်ချက်ပြုတ် စားခြင်း၊ ကြော်စားခြင်း၊ မီးကင်စားခြင်းများ ပြုနိုင်သည်။
အရွက်နုကိုငရုတ်ကောင်း အရည်တွင်စိမ်၍ ဆား၊မန်းကျည်းသီး၊ ငရုတ်သီးနှင့် ရောထောင်းပြီး တိုက်ကျွေးလျှင်
အသည်းရောင်အသား ဝါရောဂါ၊ သည်းခြေ ရောဂါတို့ကို သက်သာ စေသည်။
အရွက်နုကို ကြိတ်ပြီး အသည်းရောင်သည့် နေရာကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် လိမ်းပေးပါက ရောဂါ သက်သာသည်။
အရွက်နုကိုညက်အောင်ထောင်း တစ်ညသိပ်ပြီးသကြားအနည်း ငယ် ထည့်၍ ရေကျက် အေးနှင့် နေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်ပေးလျှင် အဖျဉ်း(ရေဖျဉ်း)ရောဂါ ပျောက်သည်။
ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကို ရေနွေးဖျောပြီး သောက်က ဝမ်းချုပ်လေချုပ် ပျောက်ကင်း၍ ဝမ်းပျော့ ဝမ်းမှန် စေသည်။
ဝမ်းဗိုက်လေပွ လေထခြင်းကို တန့်စေသည်။ လေနာ လေအောင့်လေထိုး လေစူး သက်သာသည်။
ကင်ပွန်းရွက် ဟင်းချိုသည် လူနှင့် အခါခပ်သိမ်း တည့်သည်။ ကိုယ်တွင်း အပူကို ငြိမ်းစေသည်။
ကျောက်ကပ်ကို အားပေးသဖြင့် ဆီးရွှင်သည်။ ဆီးပူဆီး အောင့်ညောင်းကျ ပန်းသေ ပန်းညှိုးမှ အစကောင်းမွန်သည်။
သွေးသားကို သန့်စင်စေသဖြင့် ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနုပျိုကြည်လင် ကာ အဆီကျ ပေါ့ပါး စေပါသည်။
ငှက်ဖျားရောဂါ၊ အစာအိမ်ရောဂါ၊ သွေးနှင့် ဆိုင်သော ရောဂါ၊ အဖြူကွက်ထ ရောဂါရှိသူတို့ အနေဖြင့် ကင်ပွန်းချဉ် အမြဲစားသုံး သင့်သည်။
နှလုံးရောဂါ ရှိသူအား ကင်ပွန်းချဉ် ငါးကျပ်သား၊ ထန်းလျက် ၁ဝ ကျပ်သား၊ ဆားအသင့်အတင့်နှင့် ကျို၍ တစ်နေ့သုံးကြိမ် မှီဝဲ စေသင့်သည်။
နာလန်ထစ လူမမာအား ကင်ပွန်းရွက်ဟင်းချိုနှင့်ထမင်းပူပူတွင် နှပ်ထားသော ငါးပုပ်ခြောက်တို့ အတူ ကျွေးပါကစားရသူလူမမာ အလွန်အဆင် ပြေသည်။
ကင်ပွန်းရွက်ကို အသားငါး တစ်မျိုးမျိုးနှင့်ရောနှော၍ကြော်စား လျှင် ထမင်းမြိန်ပါသည်။
အစာလမ်းကြောင်း မကောင်းသူများ၊ အစာမကြေ ရောဂါ ရှိသူများနှင့် အူရောင်ရောဂါ ရှိသူများ အတွက် ကင်ပွန်းချဉ်ကို အချဉ်ချက်ပြုတ် စားပေးရန် လိုသည်။
ကင်ပွန်းရွက်နုကို အမှုန့်ရအောင် လှီးပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆိတ်ဖူး၊ နနွင်း၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ပုစွန် ခြောက်မှုန့်၊ သီဟိုဠ်စေ့ သင့်ရုံထည့်၍ ဆီဖြင့် နှံ့အောင်နယ်ပါ။
ဂျုံမှုန့်နှင့် အနေတော် ဆုပ်နယ်၍ မီးပြထားသော ရဲယိုရွက်နှင့် ထုပ်ပါ။
ငှက်ပျောရွက်ဖြင့် ထပ်မံ ထုပ်ပြီးနောက် ညှပ်ဖြင့် အထက်အောက် လှန် မီးကင်လျှင် အနံ့သင်းသင်း ကင်ပွန်းရွက်ကင်ကို ရသည်။
နေမကောင်းသူများ၊ ခံတွင်း ပျက်သူများကို ဓာတ်စာဆေးဝါး အဖြစ် စားသုံး စေနိုင်သည်။
ပူပွငျး ခွောကျသှသေ့ော နှကောလနှငျ့ လိုကျဖကျသော အစာလညျးဆေး၊ ဆေးလညျး အစာ တဈမြိုးမှာ ကငျပှနျးခဉျြ ဖွဈသညျ။
ကနျြးမာသူ အတှကျ အာဟာရဖွဈပွီး မကနျြးမာသူ အတှကျ ဆေးဝါးဓာတျစာ ဖွဈသညျ့ ကငျပှနျးခဉျြကို အဖိုးနညျးဝနျပါ သူသူငါငါ လှယျကူစှာ စားသုံး နိုငျသညျ။
ကငျပှနျးခဉျြပငျသညျ နှယျယောငျပငျယောငျခြုံပငျမြိုးဖွဈသညျ။ ပြော့ပြောငျးသော ပငျစညျနှငျ့ အရှကျတံတို့တှငျ ဆူးရှိသညျ။
အခကျစိမျးမြား၌ နီမှိုငျးမှိုငျး အရောငျအဆငျး ရှိသညျ။ အရှကျ သေး ငယျပွီး ရှကျထိပျ ဝိုငျးသညျ။
အသီးမှာ သီးတောငျ့ရှညျ မြိုးပွား၍ ဖွောငျ့သညျ။ အစမြေ့ား ကွားတှငျ အဆဈမြား ဖွဈကာ ခြိုငျ့ဝငျနသေညျ။
မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့အပွား သဘာဝ အလြောကျ အလကြေ့ ပေါကျသော စားသုံးပငျ ဖွဈသညျ။
ကငျပှနျးခဉျြကို ဟငျးခြို ခကျြသောကျခွငျး၊ အခဉျြခကျြပွုတျ စားခွငျး၊ ကွျောစားခွငျး၊ မီးကငျစားခွငျးမြား ပွုနိုငျသညျ။
အရှကျနုကိုငရုတျကောငျး အရညျတှငျစိမျ၍ ဆား၊မနျးကညျြးသီး၊ ငရုတျသီးနှငျ့ ရောထောငျးပွီး တိုကျကြှေးလြှငျ
အသညျးရောငျအသား ဝါရောဂါ၊ သညျးခွေ ရောဂါတို့ကို သကျသာ စသေညျ။
အရှကျနုကို ကွိတျပွီး အသညျးရောငျသညျ့ နရောကို စိတျရှညျ လကျရှညျ လိမျးပေးပါက ရောဂါ သကျသာသညျ။
အရှကျနုကိုညကျအောငျထောငျး တဈညသိပျပွီးသကွားအနညျး ငယျ ထညျ့၍ ရကေကျြ အေးနှငျ့ နစေ့ဉျမှနျမှနျသောကျပေးလြှငျ အဖဉျြး(ရဖေဉျြး)ရောဂါ ပြောကျသညျ။
ကိုယျဖော ကိုယျရောငျ အူရောငျ မွငျးသရိုကျ လနောမွဈ ခွောကျနာ စသညျ တို့ကိုလညျး နိုငျသညျ။
ကငျပှနျးခဉျြရှကျကို ရနှေေးဖြောပွီး သောကျက ဝမျးခြုပျလခြေုပျ ပြောကျကငျး၍ ဝမျးပြော့ ဝမျးမှနျ စသေညျ။
ဝမျးဗိုကျလပှေ လထေခွငျးကို တနျ့စသေညျ။ လနော လအေောငျ့လထေိုး လစေူး သကျသာသညျ။
ကငျပှနျးရှကျ ဟငျးခြိုသညျ လူနှငျ့ အခါခပျသိမျး တညျ့သညျ။ ကိုယျတှငျး အပူကို ငွိမျးစသေညျ။
ကြောကျကပျကို အားပေးသဖွငျ့ ဆီးရှငျသညျ။ ဆီးပူဆီး အောငျ့ညောငျးကြ ပနျးသေ ပနျးညှိုးမှ အစကောငျးမှနျသညျ။
သှေးသားကို သနျ့စငျစသေဖွငျ့ ရုပျဆငျးအင်ျဂါနုပြိုကွညျလငျ ကာ အဆီကြ ပေါ့ပါး စပေါသညျ။
ငှကျဖြားရောဂါ၊ အစာအိမျရောဂါ၊ သှေးနှငျ့ ဆိုငျသော ရောဂါ၊ အဖွူကှကျထ ရောဂါရှိသူတို့ အနဖွေငျ့ ကငျပှနျးခဉျြ အမွဲစားသုံး သငျ့သညျ။
နှလုံးရောဂါ ရှိသူအား ကငျပှနျးခဉျြ ငါးကပျြသား၊ ထနျးလကျြ ၁ဝ ကပျြသား၊ ဆားအသငျ့အတငျ့နှငျ့ ကြို၍ တဈနသေုံ့းကွိမျ မှီဝဲ စသေငျ့သညျ။
နာလနျထစ လူမမာအား ကငျပှနျးရှကျဟငျးခြိုနှငျ့ထမငျးပူပူတှငျ နှပျထားသော ငါးပုပျခွောကျတို့ အတူ ကြှေးပါကစားရသူလူမမာ အလှနျအဆငျ ပွသေညျ။
ကငျပှနျးရှကျကို အသားငါး တဈမြိုးမြိုးနှငျ့ရောနှော၍ကွျောစား လြှငျ ထမငျးမွိနျပါသညျ။
အစာလမျးကွောငျး မကောငျးသူမြား၊ အစာမကွေ ရောဂါ ရှိသူမြားနှငျ့ အူရောငျရောဂါ ရှိသူမြား အတှကျ ကငျပှနျးခဉျြကို အခဉျြခကျြပွုတျ စားပေးရနျ လိုသညျ။
ကငျပှနျးရှကျနုကို အမှုနျ့ရအောငျ လှီးပွီး ကွကျသှနျဖွူ၊ ဆိတျဖူး၊ နနှငျး၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ပုစှနျ ခွောကျမှုနျ့၊ သီဟိုဠျစေ့ သငျ့ရုံထညျ့၍ ဆီဖွငျ့ နှံ့အောငျနယျပါ။
ဂြုံမှုနျ့နှငျ့ အနတေျော ဆုပျနယျ၍ မီးပွထားသော ရဲယိုရှကျနှငျ့ ထုပျပါ။
ငှကျပြောရှကျဖွငျ့ ထပျမံ ထုပျပွီးနောကျ ညှပျဖွငျ့ အထကျအောကျ လှနျ မီးကငျလြှငျ အနံ့သငျးသငျး ကငျပှနျးရှကျကငျကို ရသညျ။
နမေကောငျးသူမြား၊ ခံတှငျး ပကျြသူမြားကို ဓာတျစာဆေးဝါး အဖွဈ စားသုံး စနေိုငျသညျ။
“သေတဲ့အထိ လေမဖြတ်ဘူး” …ဒီဆေးနည်းလေးသာဆောင်ထားပါ.
“မာနတွေကြီးခဲ့ပြီး သေခါနီးအချိန်ကျမှ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဆိုတဲ့ ထိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသား”
ဂူထဲက လူငယ် ၁၃ ဦးကို ဘယ်လိုမျိုး ကယ်တင်နေကြတာလဲဆိုတာ
ဒီပို့စ် ကို တွေ့ ခွင့် ဖတ် ခွင့် ရ သူ တိုင်း မိ မိ သည် မဟာကံထူးရှင်ဖြစ်နေကြောင်း သိခွင့်ရပါလိမ့်မည်
“အချိန်မတိုင်ခင်ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးလေး…. ခွေးကိုက်ခံရလို့ ...
“ဆင်ဆာထိသွားတဲ့ …ရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်.. တိုင်ရွန်ရဲ့...